Iivenkile eziVape ezi-7 eziGqwesileyo kwi-Intanethi: Iindawo eziGqibeleleyo zokuThenga iVaping Gear kunye neJusi - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ezona ndawo ziVenkile kakhulu zeVape kwi-Intanethi ngo-2021: Iivenkile eziphezulu ezi-7 ngokukhethwa okukhulu kweGiya kunye neJusi yeVape
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, kuye kwakho uqhushumbo kwiivenkile vape online phesheya kwe-US. Nangona kunjalo, zininzi iiwebhusayithi ze-vape onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukwazi ukuba zeziphi iivenkile ze-vape ezinesidima kwaye zithengisa nje ii-clones ezincinci ezivela e-China.
Ungakhathazeki-apha sikuphathela ezona venkile zintengiso ze-Intanethi zithengisayo yokwenene, iimveliso eziyinyani .
Nokuba ujonga i-e-liquids elula okanye izixhobo eziphambili ze-vape njengeemods kunye ne-sub-ohm tank, sinokhetho olukhulu lweenkampani ze-US-based vape ezibonelela ngezaphulelo kwiimveliso ezizodwa ezivela kwi-SMOK ukuya kwi-Aspire kunye ne-Beard Vape Co .
Ukuba ufuna iimpahla eziphezulu ze-vape ngokuthumela simahla, funda ku!
Ezona ndawo ziVenkileyo kunye neeSayithi ezikwi-Intanethi
Eyona nto ibalaseleyo - Vape ezisibhozo
Eyona ilungele ukulahlwa- IproVape
Ngaphezulu kwama-70 e-liquid brand - Ivenkile yeVape engenasiphako
Eyona ndawo yokuthenga ijusi yevape - Iijesi
Ihlala iqhuba ukuthengisa - Utywala
Izinto ezinokuphinda zakhiwe kunye neekititi zokuqalisa - IVaporDNA
Ukuhambisa kunye nokubuyisela umgaqo-nkqubo omkhulu Ivenkile yeVape V
1. Vape ezisibhozo -Eyona Vape yeeVenkile zikwi-Intanethi zizonke
Icandelo lokususa ixabiso eliphantsi
Iitanki, iikiti, iibhokisi zeemod, iinkqubo zeepod
Iwebhusayithi ekulula ukuyisebenzisa
Iijusi ezahlukeneyo, iityiwa zetyuwa, kunye necandelo lama-420
Ukuba ufuna i Ivenkile efanelekileyo ye-vape kwi-intanethi , Awungekhe uhambe gwenxa nge-8 Vape (okanye i-8 Vape). Le venkile ithengisa iimods ezahlukeneyo, iimods, kunye neenkqubo zeepod ezivela kwiimveliso ezahlukeneyo, zihlala zinikezela ngezaphulelo ezizodwa (i-80 +% isaphulelo) kwicandelo labo lokucaca, ke kulungile ukuba ufumane izisulu.
Ii-odolo zithunyelwa ngokukhawuleza kwaye iwebhusayithi ilula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa - ungacoca iimveliso ngokuhambisa amanzi okanye ngesitayile, ufumane kanye le nto uyifunayo. Bathengisa kuphela iimveliso eziyinyani kwi-Vape Eight, kwaye kukho ne 420 ivenkile ukutshaya okunye ukutshaya.
Mbini. IproVape -Eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga iiVape ezilahlwayo kwi-Intanethi
Ukhetho olukhulu lweemveliso ezinkulu
Ii-e-juices ze-CBD kunye nezixhobo
Ukuhanjiswa kweeyure ezingama-24 kwii-odolo
Ithengisa umphunga olahlayo nawo
Ukuba ungumvaper omtsha oqhubeka nokutshaya kunye / okanye ukuziqhelanisa nazo zonke ezi zixhobo zomphunga, unokufuna ukuzama ezinye zeemveliso ezilahlwayo ezivela kwiProVape. Ezi zinto zivelisa ubungakanani obuncinci bomphunga, kwaye amaxabiso abiza kakhulu xa uwonke.
Banokuba sisingeniso esihle sokwenyuka kweewbies!
IproVape ikwathengisa zonke iimveliso zomphunga oqhelekileyo onokuzilindela, kunye noluhlu olunomdla lweempawu kubandakanya Ukuzikhukhumeza, UKUTSHAYA, Ukulangazelela, Ukuhamba ze kunye nokuninzi. Banamacandelo okucoca kunye neengcali zeeveki zokufumana ezo zivumelwano. Kukho ukhetho olukhulu lwejusi ye-vape ye-CBD ukujonga nayo.
3. Ivenkile yeVape engenasiphako -Eyona ilungileyo kwi-Juice ephezulu yeBrand
Ithengisa iimveliso ezingama-70 + zee-e-juices
Intengiso yexabiso eliphantsi
Banemigca yabo yejusi engenasiphako
Ukuhanjiswa kweeyure ezingama-24-48 kwii-odolo
Ukuba ufuna ngokwenene ukwandisa umdlalo wejusi yakho ye-vape, zama iVape Shop engenasiphelo. Kananjalo nokuba banelayini yabo ye-e-liquid, bayathengisa ngaphezulu Iimpawu ezingama-70 ezahlukeneyo i-e-liquids eyaziwayo nayo, ikunika uninzi lokukhetha kunye nokudityaniswa okunokubakho kwencasa.
Ufuna umxube okhethekileyo wepropylene glycol kunye nemifuno yeglycerin ukuze uvuthele ezo amafu amakhulu ngomphunga ? Uya kuyifumana apha. Ngaba ufuna i-50/50 ye-PG / VG elungileyo ukuze ufumane loo miqobo mhle yomqala nge-e-liquid yakho? Nika ngaphandle kwesiphako.
Zine. Iijesi - Eyona ndawo yokuthenga iJew Vape kwi-Intanethi ngesaphulelo
Thelekisa ii-5 ezifanayo ezifanayo
Ukuhanjiswa simahla (iiodolo ezifanelekileyo)
I-10% isaphulelo sababhalisi beendaba
Inkonzo enkulu kubathengi ngefowuni / ngencoko
Iijusi, njengoko igama lisitsho, ithengisa ijusi eninzi.
Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nabo bakhuphisana nabo, abadwelisi ukhetho lwemveliso ngohlobo, kodwa ziincasa kwaye iindidi zeencasa ezibanzi . Ukuba awuyongcali ye-e-liquid, kulungile ukujonga iziqhamo, ii-cookies, okanye i-e-liquids e-creamy ukuze ufumane ukurhoxa ngokukhawuleza.
Abanye abantu bafuna iincasa, hayi iimveliso.
Banebhlog ye-5 ephezulu apho badwelisa khona izinto ezinje ngee-flavour ze-sitrobheli ezi-5 okanye ii-flavour zemango ezi-5 eziphezulu ngokuhambelana nabathengi babo, bekuvumela ukuba uthelekise iinguqulelo ezahlukeneyo zencasa efanayo kwaye unciphise ukhetho lwakho. Ndiphakathi.
5. Ulwelo -Isiqinisekiso esinexabiso eliphantsi
Ihlala iqhuba ukuthengisa kunye nokunyusa
Khangela ii-flavour kunye neemveliso ezihamba phambili
Ukuhambisa ngenqanawe kwiintsuku eziyi-2-3 zeshishini
Ukutshintsha iikhoyili kunye neepods galore
Ukuba amaxabiso asezantsi yile nto uyilandelayo, emva koko i-E-Liquid uyigubungele. Le venkile ikwi-Intanethi ihlala iqhuba intengiso okanye inkuthazo yohlobo oluthile, ngakumbi kwi-e-liquid. Kukho icandelo elingaphantsi kwe- $ 10, kunye neebundles ezininzi kunye nokunyuselwa kwi-e-liquids yexabiso eliphantsi.
Ukuvumela ngokulula ukuba uthenge ngencasa, uphawu, okanye ukuthandwa, i-E-Liquid ikwanokukhetha okuphezulu ukutshintshwa kweekhoyili, iipods, iitanki, izixhobo, kunye nezinye izixhobo ze-vaper yemihla ngemihla ngamaxabiso afanelekileyo.
Kukho nokuhanjiswa simahla kwiindawo ezininzi zase-US, ngentlawulo ephantsi yokuhambisa ngenqanawe kwabanye.
6. IVaporDNA -Eyona ndawo yeVape egqibeleleyo yokuHanjiswa simahla kunye nezinto ezinokuphinda zakhiwe
Ukuhanjiswa simahla kwii-odolo ezingaphezu kwe- $ 49
Iinketho zokuhambisa kumazwe aphesheya
Inkonzo yabathengi endilisekileyo
Eyasungulwa eCalifornia ngo-2013, iVaporDNA ibandakanyeka kakhulu kwi Umbutho waseMelika wokuVota , Ke uyazi ukuba le webhsayithi yomphunga ithetha ishishini. Uya kufumana ukhetho olukhulu lweemveliso oza kuzongeza kwinqwelo yakho yokuthenga, kwaye uninzi lwezinto zithengiswa ngamaxabiso aphezulu.
IVaporDNA ineetoni zeemods, iiatomizers, ii-vaporizers, iijusi, kunye nokunye, okukuvumela ukuba ufumane imveliso enkulu ngexabiso elifanelekileyo. Inkonzo yabo yabathengi intle kakhulu, ngokuthumela okumangalisayo kunye nokubuyisa umgaqo-nkqubo kwiiodolo zabo zokubeka abathengi abatsha beVaporDNA ngokukhululeka.
Ukuba uyathanda yakha iimods zakho okanye uqale ekuqaleni, izinto ezinokwakhiwa kwakhona kunye neekiti zokuqalisa kwiwebhusayithi yindawo elungileyo ukuqala!
7. NYVapeShop -Eyona ndawo iVenkile yeBrick kunye noMdaka ngeVenkile ekwi-Intanethi
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye nokuqonda
Izinto ezinokuphinda zakhiwe kunye neekiti zokuqalisa
Ukuhanjiswa simahla kuyo nayiphi na imveliso
Inkqubo yomvuzo wokunyaniseka
Akukho mveliso yeklone
Ukuqhayisa ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala kuyo nayiphi na imveliso, ivenkile ye-NY Vape inokhetho oluphezulu olubonisa ezinye zeenkampani ezihamba phambili kwi-intanethi. Iwebhusayithi kulula ukuyisebenzisa kubo bobabini abafikayo kunye nabasebenzisi abaphambili ngokufanayo, isenza ukuba kubelula kumntu wonke ukuba afumane into ayifunayo.
Eyona ndawo ilungileyo yokuthenga iVape Ivenkile ekwi-Intanethi
Yeyiphi eyona Ndleko yeVape yexabiso eliphantsi kwi-Intanethi?
Kuxhomekeka kwinkampani ye-vape, ezinye zeemveliso zazo zinokubiza ixabiso elincinci kunabo bakhuphisana nabo-kuxhomekeke kwinkampani ye-vape kunye nezinto abazikhethileyo.
Umzekelo, i-EightVape yaziwa ngokuthengisa iinyanda ze-e-juice ezingabizi kakhulu Ngelixa iProVape ine icandelo leeveki ezizodwa apho bathengisa iimveliso ezithile ezigcweleyo ngexabiso eliphantsi.
Amaxabiso ayahluka kwaye iivenkile ezininzi ze-vape ezikwi-intanethi ziqhuba ukuthengisa ngokukhawuleza, ukuthengisa, okanye icandelo lokuthengisa kugqityiwe, ke qiniseka ukuba uhlala ujonga izaphulelo zamva nje kwiimveliso ezinamagama amakhulu.
Ngaba Ndifanele Ndithenge iVape kwi-Intanethi okanye kwiVenkile?
IiVapers ezinamava ziya kufuna uku-odola iimveliso zazo ezikwindawo ezivenkileni ze-vape kwi-intanethi kuba uhlala ufumana ezona zintengiso zibalaseleyo xa uthenga umphunga kwi-intanethi.
Kungenxa yokuba ivenkile ye-vape ekwi-Intanethi akufuneki ukuba ibenexhala malunga ne-overheads (irente, umbane, abasebenzi, njl. Njl.) Ababandakanyekayo ekusebenzeni kwivenkile ebonakalayo.
Ukuqhuba ivenkile kuyabiza.
Nangona kunjalo, ye umphunga omtsha abangenamava amaninzi, kungangcono ukuzama izixhobo zokukhupha kunye neejusi ezahlukeneyo kumntu.
Indawo ezininzi zokugcina izitena kunye nodaka zinobungane, abasebenzi abanolwazi abanokunceda umphunga omtsha ufumane amava abawakhangelayo kwaye ubathumele kwicala elifanelekileyo.
Ngaba unoku-odola ijusi yevape kwi-Intanethi engaphantsi kwama-21?
Hayi, awunakho uku-odola ijusi ye-vape kwi-intanethi ukuba ungaphantsi kweminyaka eyi-21 ukusukela ngoDisemba 2019, iminyaka esemthethweni yokuphuma kuyo yonke i-US iminyaka engama-21 ubudala.
Umthetho othintela ukuthengiswa kweemveliso zecuba kubantu abangaphantsi kweminyaka engama-21 ubudala wandiswa ukuba ubandakanye iimveliso ze-vape, ezibandakanya ijusi ye-vape i-e-juice okanye i-e-liquid.
Ngaba ungazithenga iiVapes kwiAmazon?
Hayi, awungekhe uthenge umphunga kwiAmazon eMelika. Oku kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zonikezelo lwe-vape, ezinje ngeemods, i-e-liquids, kunye ne-sub-ohm tank.
I-Amazon ayikuvumeli ukuthengiswa kweemods zevape kunye nezinye izixhobo zevape ngenxa yenkxalabo malunga nokuqinisekiswa kweminyaka kunye nokunyaniseka - iAmazon ayenzelwanga ukuthengisa iimveliso ezifuna ukuba abathengi babe neminyaka ethile ukuze bazithenge.
Ngaba Amazon Thengisa Vape Ijusi?
IAmazon ayithengisi ijusi yevape eMelika. Ukuba ukhangela ijusi ye-vape kwiAmazon, uya kuba nakho ukuthenga iibhotile ezingenanto ezilungiselelwe abathengisi okanye abantu abazenzela ijusi yevape.
Ngokwewebhusayithi yoMthengisi ophakathi kwiAmazon:
Umgaqo-nkqubo weAmazon uthintela uluhlu okanye ukuthengisa kwiAmazon iisigarethi ze-elektroniki kunye neemveliso ezinxulumene nazo, ezinje ngeebhetri kunye nejusi ye-e-liquid, nokuba iqulethe inicotine.
Kukho ukungafani kwiivenkile zamazwe aphesheya kweAmazon. Umzekelo, IAmazon UK ikuvumela ukuba uthenge iimveliso ezahlukeneyo ze-e-liquid kwi-intanethi.
Yintoni iNic Salt?
Iivenkile eziphambili zevape zihlala zithwala iimveliso zeNic Salt, kodwa yintoni iNic Salt ngokuchanekileyo?
I-Nic yeTyuwa luhlobo olukhethekileyo lwejusi ye-vape esebenzisa uhlobo olufanayo lwe-nicotine efumaneka kwicuba, isenza iziphumo enamandla ngakumbi kunaleyo yejusi eqhelekileyo.
Abantu ababekade betshaya abanqwenela ukuba ngumphunga banokuzuza kuNic Salt, njengoko amava okutshaya esondele kufutshane nokutshaya.
Kwenzeka ntoni ukuba umntu ongaphantsi kweminyaka athenga iimveliso zokuVota kwi-Intanethi?
Ukuze uthenge i-vapes kwi-intanethi, uhlala ufuna uhlobo oluthile lwe-ID kunye nokuqinisekiswa kweminyaka ukubonisa ukuba ungumntu wokwenene (okt ayiyiyo i-bot) kwaye uneminyaka leyo uthi uyiyo.
Uninzi lweewebhusayithi zevenkile zevape zifuna iskena sakho ilayisensi yokuqhuba, ipaspoti , okanye efanayo ifom yesazisi . Basenokucela ukusayinwa kwedijithali ukuqinisekisa ukuba uneminyaka engama-21 ubudala okanye ngaphezulu.
Ukuba ulawula uku-odola izixhobo ezikwi-intanethi nangona ungaphantsi kweminyaka, ivenkile ebithengisele yona inokubethwa ngezohlwayo ezinzulu.
Imithetho iyahluka ngokwamazwe, kodwa i-vaper engaphantsi ebanjwe ngamapolisa inokuba njalo Ihlawuliswe amakhulu amawaka eedola .
ECalifornia, izohlwayo ze $ 100 ukuya kwi- $ 500 kubantu abatshayayo nabangaphantsi kweminyaka, okanye ngamanye amaxesha ungaya kwinkqubo yokufundisa ngecuba okanye ukuphambukisa endaweni yokuhlawuliswa.
Imimandla engaphezulu nangaphezulu ijonge ukwazisa imithetho efanayo.
Okukwintsusa: Yeyiphi eyona Vape yeeVenkile zikwi-Intanethi?
Ukuba bekufuneka sikhethe iwebhusayithi enye, ngokuqinisekileyo singacebisa Iivapes ezisibhozo . Ukuqhayisa ukuhambisa ngokukhawuleza , Uluhlu olukhulu lweemveliso, a Icandelo le-420 , nic ityuwa, kunye nesiqhelo ukuthengiswa kwemvume , IiVapes ezisibhozo zezona zilungileyo kwaye ikhuselekile indawo yokuthenga umphunga kwi-intanethi ngoku.
Siyathemba ukuba ulonwabele uluhlu lwethu lweevenkile eziphezulu ze-vape ezikufutshane nawe. Ukusuka kwiincasa ze-e-liquid ezinamandla ukuya kwi-vaporizers ezipholileyo kunye nezixhobo ezomileyo zemifuno, zininzi iimveliso ezilungileyo ukuzama phaya ukuba zinomphunga omtsha kunye namava ngokufanayo.
Nokuba yeyiphi na ivenkile ye-vape ekwi-intanethi ogqibela ukuyikhetha, siyathemba ukuba uza kufumana ezona mveliso zilungileyo, iimveliso kunye nokujongana neemfuno zakho. Umnqweno omhle!
UMongameli Obama Ngaba (Ngokwenyani) kwiziyobisi
Abantu Bacinga U-Ernest Hemingway Wabathiya Abasetyhini-Ngokwenyani Akazange
Iiprojekthi zeDiitch zibonisa iNqaku elingakhange livavanywe kwi-LA Artist / Occultist uMarjorie Cameron
Beyonce kunye ne-F-Word
ungasusa njani iintlawulo ngokwakho
unokucofa isidobi ukuba kulandelwe umva
I-cingular engenazingcingo yokubuyela umva ngaphandle
Eyona venkile ikwi-intanethi efanelekileyo ye-2019
Fumanisa ukuba ngubani inombolo yakhe yomnxeba
win imali online oomatshini ekufakwa